Game Controller၊ Ps4 Controller၊ Switch Controller - Mcldosly
5 နှစ်ကြာသမိုင်းနှင့်သွား၊ ဂိမ်းကစားခြင်းလူနေမှုပုံစံကိုတိုးတက်အောင်ကြိုးစားပါ။
MCLDOSLY ဂိမ်း၏ လွန်ခဲ့သည့်5နှစ်တာကာလအတွင်း ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့် ဗီဒီယိုဂိမ်းကိရိယာများကို ဖန်တီးခဲ့ပြီး အဆိုပါကိရိယာများနှင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာများကို ဂိမ်းကစားသူများ၊ လိဂ်များနှင့် အကြီးဆုံးလက်ကားရောင်းချသူများထံ တိုက်ရိုက်ယူဆောင်လာကာ အကောင်းဆုံးဒဏ္ဍာရီထိန်းချုပ်ကိရိယာများကို ကမ်းလှမ်းရန်နှင့် ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းအတွက် ဂိမ်းကစားသည့်ဘဝပုံစံကို မြှင့်တင်ပေးရန် အမြဲကြိုးစားနေပါသည်။
PS4 Wireless Controller၊ Playstation အတွက် အားပြန်သွင်းနိုင်သော Gamepad Remote ကို အဆင့်မြှင့်ပါ...
PS4 အတွက် Wireless Controller၊ Built-in 100 ဖြင့် PS4 Controller အတွက် အစားထိုး...
DOSLY ကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်ကိရိယာ PS 4/Pro Console/Slim/PC/Android/IO...
PS4 အတွက် DOSLY Gamepad Controller၊ Wireless PS4 Controller သည် PS4 နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်...
DOSLY PS4 Controller ကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်ကိရိယာ PS-4/Pro/Slim/PC နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော...
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အသစ်များရော၊ ပြန်ဝင်လာသူအားလုံးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများစွာကိုလည်း ပေးပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဖြစ်လာခြင်းနှင့် ခက်ခဲသောဝယ်ယူမှုအတွေ့အကြုံရှိခြင်းအတွက် နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းများကို အခမဲ့စစ်ဆေးကြည့်ပါ။
ပြီးပြည့်စုံသော အစပျိုးဒီဇိုင်းများနှင့် နှိပ်နိုင်သော Joystick များသည် သင့်အား console အတွေ့အကြုံကို အပြည့်အဝခံစားစေပါသည်။
မည်သည့်စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများနှင့် OEM နှင့် ODM ပရောဂျက်ကိုကြိုဆိုပါသည်။
NINTENDO SWITCH/LITE ကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်ကိရိယာ
၎င်းသည် နိုးထသည့်လုပ်ဆောင်ချက်၊ နားကြပ်ပေါက်၊ AUTO-FIRE TURBO၊ လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်မှု၊ ချိန်ညှိနိုင်သော တုန်ခါမှုစသည်ဖြင့်၊ ချယ်ရီပန်းရောင်ပါရှိသော MYTRIX ကြိုးမဲ့ PRO ထိန်းချုပ်ကိရိယာဖြစ်သည်။1. [ကြိုးမဲ့ခလုတ် ထိန်းချုပ်ကိရိယာနှင့် နားကြပ်ပေါက်နှင့် ကျောင်းလက်ဆောင်] ပန်းရောင်ခလုတ် ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် Nintendo ခလုတ်နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်...
၎င်းသည် 3-အဆင့် TURBO လုပ်ဆောင်ချက်၊ ချိန်ညှိနိုင်သော တုန်ခါမှု4အဆင့်၊ ဝင်ရိုးခြောက်ခု လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်မှု၊ ခလုတ်တစ်ချက်နှိုးဆွခြင်းနှင့် မြေပုံဆွဲခလုတ်များပါရှိသော NINTENDO SWITCH/SWITCH LITE အတွက် ကြိုးမဲ့ SWITCH PRO ထိန်းချုပ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။1. [ဒီဇိုင်းအသစ် Switch Controller]- ဤခလုတ်ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် Nintendo Switch နှင့် Switch Lite အတွက်သင့်လျော်သည်....
ဒီဇင်ဘာ ၀၃၊ ၂၀၂၁
လက်ပတ်ကြိုးပါသော ဘယ်ညာ NEON JOYCON pad controller
1. ပြီးပြည့်စုံသော လိုက်ဖက်ညီမှု- Nintendo Switch အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်- Switch Joycon အတွက် စံပြ အစားထိုးမှု၊မူလ Joy-con ခလုတ်များ အတူတူ၊လက်ကိုင်မုဒ်တွင် အသုံးပြုရန် လက်တစ်ဖက်စီကို သီးခြားလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုနိုင်သည် သို့မဟုတ် ကွန်ဆိုးလ်နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ခြစ်ရာဒဏ်ခံပြီး စလစ်မကပ်ဘဲ တာရှည်ခံ ABS ပစ္စည်း။Ergonomically အဆင်ပြေသော ...
နိုဝင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၂၁
NINTENDO SWITCH PRO controller switch controller အစားထိုး၊ wireless switch controller သည် အားပြန်သွင်းနိုင်သည်
1. [ဗားရှင်း 12.0.0 အပ်ဒိတ် သုံးစွဲသူများ- အဆင့်မြှင့်တင်မှု ပက်ကေ့ဂျ်အသစ်တစ်ခု ရယူရန် ရောင်းချသူကို တောင်းဆိုပါ။!!【ကြိုးမဲ့နှင့် တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်- Bluetooth မှတဆင့်၊ ဤ switch pro controller ကို switch console သို့ လျင်မြန်စွာ တည်ငြိမ်စွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ကြိုးမဲ့နည်းပညာသည်3အတွင်း ယုံကြည်စိတ်ချရသော အချက်ပြမှုများကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်...
နိုဝင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၂၁
ကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်ကိရိယာ PS-4/PRO/SLIM/PC နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သောပလပ်ဖောင်း- PS-4 ကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် PS-4/Pro/Slim/PC တို့နှင့် အပြည့်အဝသဟဇာတဖြစ်သည်။ဗားရှင်း 2021- ဘက်ထရီပမာဏကို 1000mAh သို့ အဆင့်မြှင့်တင်ထားပြီး ထိန်းချုပ်မှုအကွာအဝေး 32 ပေအထိ ရှိနိုင်သည်။Dual vibration motors ၊ joysticks ၊ touch screen ၊ ခလုတ်ခံစားမှု ၊ sound effects နှင့် sensitivity တွင် al...